भारतले ब्राजिललाई उछिन्यो, अमेरिकालाई पनि जित्ने संकेत ! – Sulsule
भारतले ब्राजिललाई उछिन्यो, अमेरिकालाई पनि जित्ने संकेत !
सुलसुले २०७७ भदौ २१ गते १९:३२ मा प्रकाशित
काठमाडौं,२१ भदौ ।
कोरोना संक्रमणका हिसावले भारत विश्वमै दोस्रो धेरै संक्रमित मुलुक बनेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा भारमा एकै दिन ९० हजार ६३३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्ठी भएपछि तेस्रो स्थानमा भएको भारत दोस्रो धेरै संक्रमित भएको ब्राजिलसँग हाराहारीमा पुगेको थियो । शनिवार साँझ दुबै ४१ लाख संक्रमितको हाराहारीमा पगेका थिए ।
आइतबार बेलुकासम्म ब्राजीलमा ४१ लाख २३ हजार संक्रमित थिए भने भारतमा आइतवार साँझ ४१ लाख ३१ हजार ६९० पुगेकोछ । तर त्यसको केही घण्टा पछि ब्राजिललाई भारतले उछिनेको छ र विश्वमै दोस्रो धेरै संक्रमित हुने मुलुक बनेको छ ।
अब भारत भन्दा बढि संक्रमित हुने मुलुक अमेरिका मात्र बाँकी छ । अमेरिकामा आइतबारसम्म संक्रमितको संख्या ६४ लाख नाघिसकेको छ भने भारतको अमेरिका भन्दा २२ लाख संक्रमित कमी रहेका छन् । अहिले भारत विश्वमै दैनिक रुपमा सबै भन्दा बढी संक्रमित हुने मुलुक बनिसकेको छ ।